Mpanao Politika Filipiana Mifandray Aminà Kaonty Any Ivelany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Avrily 2013 15:08 GMT
Izany tetikasa izany dia notarihian'ny Fiombonana Iraisam-pirenena ho an'ny Fanadihadiana an-Gazety, izay nanetsika mpanao gazety 86 avy taminà firenena 46. Nahatety tahiry maherin'ny 2,5 tapitrisa ny ekipa, izay voalaza ho “maherin'ny avo 160 heny ny haben'ireo tahiry ireo raha oharina amin'ny fivoahana antsokosokon'ny antontan-taratasin'ny Fanjakàna Amerikana nataon'ny Wikileaks tamin'ny 2010.”
Izany tatitra fanadihadiana izany dia nanapoitra ireo famindram-bola miafina ataon'ireo mpanao politika, mpisoloky ary ireo mpanefoefo manerana izao tontolo izao.” Ary maro lavitra noho izany:
Ireo antontan-taratasy navoaka dia mampiseho tranga sy salan'isa — famindràna lelavola, datin'ny fanambarana orinasa, fifandraisana eo amin'ireo orinasa sy ny olon-tsotra — izay mampiseho ny fomba an-kerisetra niparitahan'ny tsiambaratelo ara-bola ivelany maneran-tany, ka mamela ireo manan-karena sy ireo mahalala olona mba tsy handoa hetra ary hamelona ny kolikoly sy ireo olana ara-toekarena, na any amin'ny firenena manan-karena izany, na any amin'ny firenena mahantra.
Ny Governora Imee Marcos. Sary nalain'i Alaric Magno A. Yanos, avy tao amin'ny Wikipedia
Anisan'ireo Filipiana mpanao politika izay voatonona anarana ho mifandray aminà kaonty any ivelany any amin'ireo Nosy Virijiny Britanika ny governoran'i Ilocos Imee Marcos, ny loholona Manny Villar ary JV Ejercito, mpikambana ao amin'ny Kongresy. Marcos sy Ejercito dia zanak'ireo filoha teo aloha Ferdinand Marcos sy Joseph Estrada.
Nanoratra i JV Ejercito tao amin'ny kaontiny Facebook fa tetika hisomparana ny filatsahany hofidiana amin'ny fifidianana loholona io tatitra io:
Nanomboka ny asa fanapotehana. Nanomboka tamin'ny fandaniana be indrindra ho an'ny dokambarotra izany, ilay mpialikalika voalaza ho zanaky ny mpiray tampo, dia izao indray momba ny resaka ara-bola sy fandraharahàna. Olona mitovy, fomba mitovy
Hotontosaina amin'ny volana ho avy io ny fifidianana Loholona sy ireo fifidianana antenantenany any an-toerana. Manana hafatra ho an'ireo mpitatitry ny PCIJ i JV:
Manantena aho fa tsy ho tafalatsaka amin'ny fandrebireben'ireo olona tsy avotra amin'ny politika maloto ry zareo.
Cong B. Corrales dia namintina ny hevitr'ireo mpanao politika tamin'ity tatitra fanadihadiana ity:
Tsy niraharaha ireo fanadihadian'ny PCIJ i Marcos, i Villar kosa nanaiky ireo kaonty ireo, ary nilaza fa kaonty shell nisy $1 monja io. Raha ny an'i Ejercito kosa dia tsy mazava ny valinteniny, ary nanambara fa nampiasaina mba hisomparana ny firotsahany hofidiana ho loholona ny PCIJ.
Malou Mangahas dia nampitaha ny fandraisan'ireo mpanao politika ny valitenin'ireo minisitra teo aloha tao amin'ny governemanta izay voatonona anarana tao anatin'ilay tatitra:
Raha tsy azo na somary nivaombaona ireo mpikambana telo voafidy rehefa nanontaniana ny momba ireo kaontiny miafina any ivelany, avy hatrany dia naneho fihetsika nivantana sy nifona kosa ireo mpiasa roa miasa aminà orinasam-panjakàna, nandritra ny fanadihadiana nataon'ny PCIJ ho an'ity tatitra ity.
Manila Standard Today dia nanoratra matoan-dahatsoratra an-gazety iray mangataka fanazavàna be be kokoa avy amin'ireo mpiasam-panjakàna ireo:
Fantatsika rehetra fa maro amin'ireo mampiseho ny tsy fisian'ny fangaraharahàna no mety manana ny tsiambaratelony manokana ihany koa. Tsy maintsy mikiry mangataka fanazavàna isika, manasazy azy ireo noho ny hosoka nataony ary hisaina lalina kokoa toy izay hanome fe-potoana azy ireo hitarihana antsika indray.
Ny Ivontoerana ho an'ny Fahalalahana sy ny Andraikitry ny Haino aman-jery dia nanandratra ilay tatitra ho toy ny votoaty manan-danja izay afaka hitari-dàlana ireo mpifidy:
Mankasitraka ny Ivonterana Filipiana ho an'ny Fanaovana Fanadihadiana an-Gazety tamin'ny tatitra roa feno sy ara-potoana momba ireo kaonty miafina any ivelany an'ireo Filipiana mpanao politika sy mpikambana tao amin'ny fahefana mpanatanteraky ny governemanta taloha. Noho izy tonga tanatin'ny vanim-potona fifidianana, tokony hanampy ireo mpifidy mba hifidy mpitarika tsara izany tatitra izany.
Miandry ny hatezeram-bahoaka i Jaywalker, mpanao politika :
Aiza ny hatezerana? Satria ve sahirana amin'ny fitadiavana sa variana mitsimpona ny sisa atsipin'ireo kandidà mifaninana ho lehibe sy halaza dia noraisintsika ho fanazarana amin'ny fifidianana izany?
Halako ny mieritreritra hoe hatsikana be fotsiny isika sady raharaha tsy avotra intsony aty Azia, tsy mba afaka mampiseho hatezerana indray mandeha tsy miverina ve isika ka hitaky ny fanenjehana ireo tafiditra amin'izany raharaha izany mandra-pahefany ny ratsy nataony rehetra?
Sven Alexander dia manana soso-kevitra izay nosoratany tao amin'ny Facebook:
Ataovy heloha ho an'ireo mpanao politika ny fananana kaonty any ivelany!